၏အနာဂတ်အနာဂတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်စမတ်ကျကျနေထိုင်ခြင်းကို 'Think Asia, Think Hong Kong' | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စမတ်ကျစွာနေထိုင်ခြင်းကို 'Think Asia, Think Hong Kong' တွင်အာရုံစိုက်ပါ။
အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စမတ်ကျစွာနေထိုင်ခြင်းကို 'Think Asia, Think Hong Kong' တွင်အာရုံစိုက်ပါ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးကြီးထွားလာများအတွက်မျှဝေနယူး Insights နှင့်အရင်းအမြစ်များ
ပုံ "စမတ်" ဖြစ်လာဖို့အကြောင်းကိုနေထိုင်နေကြသလဲ? ဘယ်လိုလူရဲ့ဘဝကဏ်ဍပါလိမ့်မယ် - ဖျော်ဖြေရေးအပါအဝင် - ကို virtual နှင့်ပိုပြီးအသိဉာဏ်ဖြစ်လာ? အဘယ်သို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ "Smart" လူနေမှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုထံမှအကျိုးရရှိနိုင်သလဲ
ဟောင်ကောင်ရှိ 10 အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကြီးအကဲအမှုဆောင်အရာရှိ - နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူမြို့ပြလူနေမှုပုံစံစတဲ့, ခိုင်မာတဲ့အိုင်စီတီအခြေခံအဆောက်အဦများ, စီးပွားရေးဖန်တီးမှုနှင့် smart- ၏နယ်ပယ်များတွင်သစ်ကိုရှုထောင့်တိုက်ဖျက်မည်ဟုသတ်မှတ်သောခိုင်ခံ့သောဆန်းသစ်တီထွင်မှု-မောင်းနှင်ကုန်ထုတ်စွမ်းရည်တပ်ဆင်ထားကာ incubating အာကာသ လူနေမှုနဲ့ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာ - မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ JW Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်မှာ၎င်းတို့၏သုတေသနနှင့်နိုင်ငံတကာချဲ့ထွင်ရာမှစက်တင်ဘာလ 1,500 ပေါ်ရှိ "စဉ်းစားပါအာရှ, ဟောင်ကောင်စဉ်းစားပါ" (TATHK) စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာထက်ပိုမို 20 တက်ရောက်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်မည် Los Angeles မြို့.
ဟောင်ကောင်ကုန်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (HKTDC) ကဖွဲ့စည်းအဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲ - ဟောင်ကောင်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေး, မြှင့်တင်ရန်ကူညီခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ထူထောင်တဲ့ပြဌာန်းချက်ခန္ဓာကိုယ် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာတကမ္ဘာလုံးကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်အာရှစျေးကွက်ဝင်အမေရိကန်ကကူညီမယ့်တစ်ရက်ချောမွေ့စွာနဲ့စေ့စေ့စပ်စပ်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည် ဟောင်ကောင်ကတဆင့်။ အာရှအားလုံးကိုပြတင်းပေါက်အဖြစ်ဟောင်ကောင်ကမ္ဘာတဝှမ်းကုမ္ပဏီများမှသို့အသာပုတ်ပါရန်အဘို့အအသစ်နှင့်မတူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုတွေ့ရမယ်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကိုလည်းတကမ္ဘာလုံးထင်ရှားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ, ဒီဇိုင်နာများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, ဝန်ဆောင်မှုပညာရှင်များနှင့်ဟောင်ကောင် start-up ဟန်ပြနှင့်အတူအကြောင်းအရာအလိုက် breakout အစည်းအဝေးများ feature ပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ fintech, ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု (IP) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ရန်ပုံငွေရှာ, ကျန်းမာရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှု & ဇီဝနည်းပညာ, Smart လူနေမှု & ဒီဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေး, ဒီဇိုင်းနှင့်ပိုပြီးပါဝင်သည်မီးမောင်းထိုးပြ။
ဤအအစည်းအဝေးများအနက်ညီလာခံလမ်းကြောင်း "စမတ်နေထိုင်မှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် Entertainment က၏အနာဂတ်" တစ်စမတ်-လူနေမှုအဆင့်မြင့်-ဖျော်ဖြေရေးအနာဂတျအတှကျဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု panoply ဖုံးအုပ်နှစ်ခု panel ကိုဆွေးနွေးပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြားအားဖြင့်တည်းဖြတ်ပါလိမ့်မည် Duncan က chiu နှင့် ပတေရုသယန်ဟောင်ကောင် Cyberport ၏အသီးသီးဒါရိုက်တာနှင့် CEO ဖြစ်သူ, ။
ထရစ်စ Lo, co-တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ of Godzpeed Autosportအဘယ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သောတရုတ်ကားချန်ပီယံရှစ် (CTCC) အလည်ခရီးအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ကားစီးရီးများပါဝင်သည်အီလက်ထရောနစ်အားကစားဂိမ်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျအသုံးပွုပရော်ဖက်ရှင်နယ်-အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောမောင်းနှင်ခြင်း simulation ဆော့ဖ်ဝဲ, ၏, တစ်ဆုရပံ့ပိုးပေး;
Winson Kwok, ဟောင်ကောင်ရေးရာအရာရှိချုပ် of GJS နည်းပညာ, အရာပြိုင်ပွဲ, multiplayer ဂိမ်းများနှင့် stem (သိပ္ပံ, နည်းပညာ, အင်ဂျင်နီယာနဲ့သင်္ချာ) အတွက် "တိုက်ခိုက်နေစက်ရုပ်" ထုတ်လုပ်ရန်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI အ) နှင့်စက်ရုပ်ရောက်ပြီးပညာရေးနှင့်တစ်ဦးစက်ရုပ်တိုက်ပွဲတွေချန်ပီယံမိတ်ဆက်ကမ္ဘာ့ဖလားဆိုက်ဘာအားကစားပြိုင်ပွဲ (WCG) နဲ့ပူးပေါင်းထားပါတယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်အားကစားယှဉ်ပြိုင်; နှင့်
ကီဗင် Lee က, co-တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ of Redspots ကို Creative, အဘယ်သူ၏ပူဇော်သက္ကာများကို 3D ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့် AR / VR ရွေ့လျားမှု-ဖမ်းယူခြင်းနှင့်မျက်နှာစကားရပ်-ဖမ်းနည်းပညာအတွက်အထူးအတူအပြန်အလှန်နည်းပညာများ, ထုတ်ကုန်များနှင့်ပလက်ဖောင်း (အဖြစ်မှန် / virtual reality လုပ်ခဲ့ပြီး) တို့ပါဝင်သည် multi-မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ။ ၎င်း၏ဖောက်သည်စားသုံးသူထုတ်ကုန်, စားသောက်ဆိုင်, မော်တော်ကား, ဘဏ္ဍာရေး, ဧညျ့ / လောင်းကစားရုံများနှင့်အခြားကဏ္ဍများအတွက် Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများမှပါဝင်သည်။
နောက်ထပ် session တစ်ခု, "ဟောင်ကောင်မတ်လူနေမှုတီထွင်မှု,"စမတ်ဖက်ရှင်စမတ်မျက်မှန်နဲ့စမတ်ကျန်းမာရေးများ၏လန်းလာသောလယ်များကိုယ်စားပြုစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေမည်ဖြစ်သည်:
ချယ်လ်ဆီး Miu, အမှတ်တံဆိပ်ဒါရိုက်တာ of MAD ကြည့်, algorithm ကို-based လက်လက်ဟန်ခြေဟန်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းအားဖြင့် - - အဘယ်သူ၏ထုတ်ကုန်ဟောင်ကောင်, ပြည်မကြီးတရုတ်နှင့်ထိုင်ဝမ်ရုံးများနှင့်အတူတစ်လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန် (AR) စမတ်-မျက်မှန်ကုမ္ပဏီထက်ပို 45 နိုင်ငံများလက်သို့အပ်ခံပြီ
Walden Lam, တွဲဖက်တည်ထောင်သူ of Unspun, တစ်စက်ရုပ်နှင့်အဝတ်ကုမ္ပဏီ - အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း, SOSV, အ Mills က Fabrica နှင့် H & M Foundation ကကျောထောက်နောက်ခံ - automated မှတဆင့်မှာအနည်းဆုံး 1% အားဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရန်မစ်ရှင်နှင့်အတူဝယ်လိုအားပုဂ္ဂိုလ်များထုံးစံဂျင်းဘောင်းဘီတည်ဆောက်ကြောင်း, ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း,
Alvin ဖြစ်သောချုံကောင်း, Co-တည်ထောင်သူနှင့် COO of Zunosaki,တတ်နိုင်စက်ရုပ်နှင့်အတူပြန်လည်ထူထောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲမယ့်လူမှုရေးမစ်ရှင်နှင့်အတူတစ်ဦးက start-up, ။ သူ့ရဲ့ flagship ထုတ်ကုန် Handyrehab - မသန်စွမ်းသူများပြည့်စုံနေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်တစ်စမတ်စက်ရုပ်လက်အိတ်သည့်စနစ် - ဆေးပညာလေဖြတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလူနာအပြည့်အဝမော်တာထိန်းချုပ် 90% သလောက်ပြန်လည်ကူညီပေးဖို့သက်သေပြနေသည်။
"အာရှ, ဟောင်ကောင်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါ" နှင့်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်အသေးစိတ်ကိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.thinkasiathinkhk.com/2019.
AR ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေး ဖြစ်ရပ်များ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ဟောင်ကောင် စမတ်နည်းပညာ လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် virtual reality VR 2019-08-29
ယခင်: V-Nova ယင်း၏ P ကို ​​+ SDK ကို၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လာမည့်စံ MPEG-5 အပိုင်း2(LCEVC) ၏ပထမဦးဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကိုကြေညာ